James Rodríguez oo jawaab cad ka bixiyay wararka lala xiriirinayo kooxda Arsenal – Gool FM
James Rodríguez oo jawaab cad ka bixiyay wararka lala xiriirinayo kooxda Arsenal
(Yurub) 13 Feb 2019. Xdiga reer Colombia isla markaana milkiyadiisu ay leedahay kooxda Real Madrid, balse qaab amaah ah ugu ciyaara Bayern Munich ee James Rodríguez, ayaa si weyn u niyad jabiyay kooxda reer London ee Arsenal.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in James Rodríguez uu iska soo xiray suurtagalnimada uu ugu biirayo kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in khadka dhexe reer Colombia uu doonayo inuu mar kale ku laabto Real Madrid, islamarkaana uu tijaabiyo awoodiisa kooxda reer Spain.
Dhinaca kale wargeyska “Mirror” ayaa sheegay in Bayern Munich ay ku qasbanaan doonto inay bixiso 36.8 milyan si heshiiska amaahda ah ay kaga dhigto mid toos ah, kadib marka la gaaro dhamaadka heshiiska amaahda ah.
Gunners ayaa la fahansan yahay in dhankeeda ay xiiso balaaran ka muujisay lasoo saxiixashada James Rodríguez, si ay uu ugu noqdo badalka Aaron Ramsey oo si rasmi ah loo shaaciyay ku biiristiisa kooxda Juventus xili ciyaareedka soo aadan.
Meeqo kiilo ayuu Marcelo ballan qaaday in uu ka dhimayo miisaankiisa ka hor kulanka Barcelona ee Copa del Rey?
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Ajax Vs Real Madrid